Waa kuma daafaca aadka loola xiriirinayo Man United? – Garsoore Sports
Waa kuma daafaca…
Kooxda Manchester United ayaa la soo warrinayaa inay si weyn u dooneeyso saxiixa daafaca dhexe ee kooxda Lens Facundo Medina taasoo sabab u ah bandhiga cajiibka ah ee uu 21 jirkan ka dhigayo horyaalka Ligue 1 ee dalka Faransiiska.
Wuxuu kasoo qalin jebiyay akaadeemiyada kooxda River Plate, markaa keddib Medina wuxuu ku biiray kooxda Lens xagaagii hore oo ay ka soo qaadatay naadiga reer Argentina ee Talleres wuxuuna isla markiiba si joogto ah uga cayaarayay horyaalka heerka koowaad ee France iyo kooxdiisa ​​dhowaan soo dalacday.
Medina waa daafac xawaare sarreeya, wuxuu ka dheereeyaa daafacyada hadda ee Manchester United , Harry Maguire iyo Eric Bailly.
Medina waa cayaaryahan ku fiican baasaska dhaadheer. waa cayaaryahan ku cayaara lugta bidix, arrintaasoo ah mid xiiso gelineysa tababare Ole Gunnar Solsjaer maadaama uu doonayo inuu dheelitir wanaagsan kusameeyo kooxdiisa.
United ayaa suuqa ugu jirta daafac dhexe sannadkan, waxaana ay baadi goobeen dhowr cayaartooy markii ay qiimeynayeen fursadaha ay heli karaan.
Daafacyada dhexe ee Phil Jones iyo Marcos Rojo ayaa loo sheegay inay iska baxaan, halka Eric Bailly uu dhowaan ku soo laabtay qaab cayaareedkiisii fiicnaa iyo taam ahaanshiyihiisa, iyadoo tababare Solskjaer uu sidoo kale haysto xiddiga akaadeemiyada kasoo baxay ee Axel Tuanzebe.
Inkasta oo ay sidoo kale isha ku hayaan xaalada Kabtanka kooxda Real Madrid Sergio Ramos, haddana inta badan bartilmaameedyadooda waa dhalinyaro aan awood u lahayn inay ku horumariyaan kooxda ku cayaarta garoonka Old Trafford.
Waxaa Bartilmaameedyadooda kamid ah Pau Torres oo bartilmaameed koowaad ah, sidoo kale Jules Kounde, Caglar Soyuncu iyo Ben White.
Wargayska Faransiiska kasoo baxa ee La Voix du Nord ayaa qoraya in kooxda Lens ay ku bixisay saxiixa Medina kudhowaad €3.6m oo lagu daray lacag gaareysa € 2.4 milyan oo dheeraad ah balse kooxda lagu naaneeso’Red Devils’ ayaa la sheegayaa inay ku yabooheeyso € 12 milyan oo iibkiisa ku aadan.
Taasi waxay Lens u tahay faa’iido weyn waxaase la filayaa kaddib iibkiisa inay cayaaryahankan amaah kusii heysan doonaan inta ka dhiman xilli cayaareedka.
Halkan hoose ka daawo goos-gooska cayaarta Fecundo Medina.
Maxaa dib-u-dhigaya heshiiska Ozil Ee Fenerbahce?